इन्डियन आर्मी राहुलकी श्रीमती काठमाडौंको होटलमा अर्कै युवकसंग फेला ! हेर्नुहोस (भिडियो सहित) – SUDUR MEDIA
February 2, 2021 February 2, 2021 AdminLeaveaComment on इन्डियन आर्मी राहुलकी श्रीमती काठमाडौंको होटलमा अर्कै युवकसंग फेला ! हेर्नुहोस (भिडियो सहित)
इन्डियन लाहुरे तनहुका राहुल गुरुगंको श्रीमती आफ्नो सानी छोरीलाई विद्यालय छोड्न भन्दै हिडेकी थिइन् । उनी त्यस पछि घर फर्किइनन् । उनी उतैवाट हराइन् । तर अहिले केही समय पछि उनको श्रीमती स्मीता जनकपुरको नारायण यादवसंग काठमाडौको गौशाला स्थित एक होटलमा करिब एक महिना देखि बस्दै आएको पत्ता लागेको छ ।
आफ्नो घर जनकपुर भएको बताउने नारायणले आफ्नो परिवारमा कोही नभएको बताएका छन् । राहुलको परिवारका सदस्यले स्मीतालाई होटलमा नारायणसंग फेला पारेका हुन् । स्मीताले आफु आफ्नै मर्जीले नारायणसंग आएको र आफु जागिरको शिलशिलामा आएको बताएकी छन् ।
भिडियो हेर्न तल क्लिक गराैँ ….
स्मीता हराएपछि उनको माइतीले आफ्नो छोरीलाई गायब बनाएको आरोप राहुलको परिवारलाई लगाएका थिए । स्मीताले आफुसंग भएको मोवाइल र सुन आफैले बेचेको बताएकी छन् । उनले आफ्नो इच्छाले नारायणको साथमा आएको भन्दै राहुलको परिवारसंग नडराउने पनि बताइन् । काठमाडौको होटलमा स्मीता फेला परेपछि राहुलको परिवारले भिडियो कल मार्फत स्मीताको माइतीलाई त्यसबारे जानकारी दिएका छन् ।
तर स्मीताले भने आफ्नो दिदीहरुको सम्पर्कमा रहेको बताइन् । उनले एक दिन अघि आफ्नो दिदीलाई आफुले आफ्नो जिन्दगीको निर्णय गरेको भनेर जानकारी दिएको बताएकी छन् । बाँकि भिडियोमा हेराैँ
धेरै समय पछी दमकमा आएर अशोकले आफ्ना साथीहरु देख्दा स्टेजमै रोए, अशोकलाइ हेर्दै टंक भाबुक हुदा माहोल यस्तो बन्यो ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)